Soo-saareyaal ka socda Bolise
Borotiinka Qudaarta Hydrolyzed (HVP)
[Muuqaalka] Jaalle ilaa Bunni budada
[ Astaamaha ]
1. Waxay kordhin kartaa saameyn cusub, caraf udgoon waxayna siin kartaa dhadhan macaan.
2. Waxa ku jira amino acids waa sare, waxa ku jira amino acids qani ah, xeryahooda peptide, acids organic, iyo nucleotides, milix ah inorganic, xubno raad, fuuq kaarboon, iwm. Waxay xoojin kartaa nafaqada cuntada iyo dareenka macaan iyo daboolo urta gaarka ah. .
3. Waxay ku habboon tahay cuntada microwave, cuntada qasacadaysan ee qaboojiyaha, cuntada shiilan, heerkulka sare, iwm. Waxay buuxisaa shuruudaha adag ee habka cuntada casriga ah.
1. Waxa ku jira udgoon sifa ah oo borotiinka dhirta ay ka mid yihiin, maaddo sare oo amino acid ah, dhadhan macaan, dhadhankeedu waa mid xooggan, kaas oo muujin kara udgoonka ugu muhiimsan iyo foil, xakamaynta ur xun.
2. Aad bay u faa'iido badan tahay caafimaadka, sababtoo ah waxay ku dhowdahay halabuurka amino acid ee jirka iyo waxa ku jira koloriin propanol ee hoos yimaada heerka xaddidan.
3. Ku dhegsigeedu wuu wanaagsan yahay, oo si fudud loo cabbiri karo.
[Ku saabsan borotiinka khudaarta Hydrolyzed (HVP)]
Borotiinka qudaarta Hydrolyzed waa sheyga ay borotiinka geedka hydrolyzes hoos yimaada catalysis aashitada. Waxa uu ka kooban yahay inta badan amino acids, sidaas darteed waxa sidoo kale loo yaqaan amino acids. Waxaa inta badan loo isticmaalaa soo saarista xashiishyada sare, samaynta cuntada la xoojiyay iyo alaabta ceeriin ee dhadhanka hilibka.
Protein-ka khudaarta Hydrolyzed (HVP) waa mid ka mid ah cuntooyinka soy-ku-saleysan ee ugu badan "buuxiyeyaal" loo isticmaalo in lagu sameeyo macno ahaan kumanyaal cunto la warshadeeyey. Waxaa laga helaa burgers khudradeed, isku darka maraqa, maraqa iyo alaabooyin kale oo badan.
Protein-ka khudaarta Hydrolyzed (HVP) waxaa si weyn loogu isticmaalaa bouillon digaaga, dhammaan noocyada maraq, dhadhanka suugo, baakadaha xawaash ee baasto degdeg ah, waxyaabaha hilibka, rootiga, badeecooyinka la dubay, xawaashyada guriga, cuntada barafaysan sidoo kale loogu talagalay kabidda nafaqada amino acid. Bixinta nafaqeynta, kordhinta cusub, dhadhanka wanaagsan, sidoo kale dhimista MSG, qiyaasta I+G iyo badbaadinta qiimaha.
Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato Borotiinka Qudaarta Hydrolyzed (HVP) macluumaad, ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto!